पूर्वमन्त्री प्रकाशशरण महतको जीवन : ग्रहदशा बिग्रेकाले चुनाव हारियो | Ratopati
personदीपेन्द्र राई exploreकाठमाडौं access_timeमाघ २१, २०७४ chat_bubble_outline0
अर्थशास्त्रमा अमेरिकाबाट विद्यावारिधि गरेका डा. प्रकाशशरण महतले पटक–पटक मन्त्रीको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । डा. महतको आर्थिक विश्लेषण र परराष्ट्रसम्बन्धी आलेख पढ्न पाइन्छन् । काँग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका डा. प्रकाशशरण महतसँग रातोपाटीको मेरो जीवनका लागि दीपेन्द्र राईले गरेको कुराकानी :
खानेकुरामा सरल छु । खानेकुरामा विशेष रुचि छैन । नेपाली खाना दाल, भात, तरकारी भए पुग्छ । साग, च्याउ, गुन्द्रुक र मस्यौरा पनि मन पर्छ । माछा, मासु र अन्डा खान्न । कहिलेकाहीं साथीभाइसँग रेष्टुरेन्ट पुग्छु । विद्यार्थीजीवनमा पकाए पनि हिजोआज भान्छा पस्न परेको छैन ।
कपडा लगाउन सोखिन छैन । सामान्यतया सर्ट–पाइन्ट लगाउँछु । श्रीमतीले किनिदिने भएकाले कपडामा वार्षिक खर्च कति हुन्छ भन्ने थाहा छैन । औपचारिक पदमा रहँदा दौरा–सुरुवाल र भादगाउँले टोपी लगाएँ । नीलो रङको कपडा मन पर्छ । ‘रेडिमेड’ कपडा धेरै प्रयोग गर्छु । कपडाको ब्रान्डबारे त्यति सचेत छैन ।
प्रतिनिधि–प्रदेशसभा निर्वाचनपछि शारीरिक अभ्यास नियमित गर्न सकेको छैन । पहिले जिमखाना जाने, ट्रेडमिलमा दौडिने र पौडी खेल्थें । योगा, प्राणायाम पनि गर्थें । ‘मर्निङवाक’ निस्कन्थें । अब निरन्तरता दिँदै छु । खानपान सामान्य भएकाले ‘डाइटिङ’ छैन । थोरै खान्छु, तर, खाइरन्छु ।
निर्वाचनपछि पत्रपत्रिकाबाहेक किताब पढेको छैन । म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी भएकाले इन्टरनेटमा अर्थसम्बन्धी नियमित जर्नल पढ्छु । अर्थ, राजनीतिसम्बन्धी सामग्री पढ्न छुटाउँदिनँ । निर्वाचनपछि लेखेको छैन । अब लेखपढमा समेत केन्द्रित हुनेछु । मेरो निजी पुस्तकालयमा चार–पाँच सय किताब होलान् । सालिन्दा १०–२० हजारको किताब किन्ने गरेको छु ।
घुमफिरमा असाध्यै अभिरुचि छ । नयाँ–नयाँ ठाउँ पुग्न, त्यहाँको सामाजिक, भौगोलिक परिवेश, आर्थिक र सामाजिक विषय बुझ्न मन लाग्छ । दुई–चारवटा छाडेर नेपालका सबै जिल्ला पुगेको छु ।
धेरै देश घुमेको छु । घुमेकामध्ये नेपाल नै मन पर्यो । नेपालजस्तो विविधता अन्य देशमा छैन । विदेश घुम्दा स्थानविशेषअनुसार मात्रै राम्रो लाग्ने गर्छ । अफ्रिकाको केही देश र दक्षिण अमेरिका घुम्ने रहर छ ।
राजनीतिक नेताको नियमित जीवन हुँदैन । पश्चिमा मुलुकजस्तो नेपालका राजनीतिक नेताले एक वर्षपछिको क्यालेन्डर तयार गर्दैनन् । सम्भव पनि हुँदैन । बिहानैदेखि भेटघाट सुरु हुन्छ । सानो ठूलो काममा जुटिइरहनुपर्छ । व्यस्त रहे पनि मोबाइल बन्द गरेर आराम गरौं भन्ने लाग्दैन । अपरिचित नम्बरबाट आएको फोनसमेत उठाउँछु । उठाउन नसक्दा सकेसम्म ‘कलव्याक’ गर्छु । फुर्सद पाइहालेमा गाउँको घर नुवाकोट पुगिहाल्छु । साथीभाइ, इष्टमित्र, कार्यकर्तासँग भेट्न त छँदै छ ।
हेर्न फुटबल र क्रिकेट मन पर्छ । केटाकेटीमा फुटबल र व्याडमिन्टन खेलेको थिएँ । सबै खेलप्रति सम्मान छ । विदेशमा जस्तो नेपालमा नियमित फुटबल प्रतियोगिता हुँदैन । कहिलेकाहीं विदेशी प्रतियोगिता हेर्छु । इन्डिया र अस्ट्रेलियाको क्रिकेट हेर्छु ।
निर्वाचनपछि दुई मोबाइल सेट प्रयोग गरेको छु । एउटा आइफोन, अर्को नोकियाको सामान्य सेट हो । आइफोन साथीले उपहार दिएका हुन् भने नोकियाको तीन–चार हजार रुपैयाँ परेको थियो । मोबाइलका एप्लिकेसनमध्ये भाइबर, वाट्स्याप, फेसबुक, ट्वीटरलगायत प्रयोग गर्छु ।
धेरैजस्तो आइप्याडबाट अनलाइनका समाचारलगायत आफूलाई आवश्यक सामग्री पढ्छु ।
टीभीमा समाचार हेर्छु । त्यसबाहेक डिसकभरी च्यानल हेर्न जाँगर चल्छ । बिहान, बेलुका टीभी हेर्ने साइत जुर्छ । घरमा १९–२० इन्चको सामसुङको टीभी छ ।
केही समयअघि साथीको छोरोको चलचित्र हेर्न गएको थिएँ । नामचाहिँ बिर्सें । कहिलेकाहीं ‘च्यानल चेन्ज’ गर्दै जाँदा टीभीमा आएको चलचित्र हेर्छु । हेरेकामध्ये फादर अफ द ब्राइट, सोलेलगायत मन परेको थियो । कलाकारमा अमिताभ बच्चन मन पर्छ । नेपाली चलचित्र धेरै हेरेको छैन ।
खानपान सादा भएकाले स्वास्थ्यमा समस्या छैन । रक्तचाप अलि कम छ । दीर्घ रोगले समातेको छैन । समय–समयमा ‘होलबडी चेकअप’ गराउँछु । खानपानबाहेक त्यतिबेला गाउँमा गरेको उकाली–ओह्रालीले अहिलेसम्म स्वस्थ रहेको हुँ ।
विषयवस्तुबारे जानकारी भए भाषण सशक्त हुन्छ तर कहिलेकाहीं विषयवस्तुबारे जानकारी नहुँदा र त्यस्तै वातावरण हुँदा कामचलाउ भाषणमात्रै हुन्छ । म ठिकै भाषण गर्छुजस्तो लाग्छ । हामी भाषणमा धेरै कुरा गर्छौं तर निष्कर्ष केही पनि आउँदैन । सकेसम्म विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आफ्नो कुरा सिधा राख्ने प्रयत्न गर्छु । सिधा कुरा राख्दा कतिपय अवस्थामा अलोकप्रिय मानिइ पनि त्यसैबाट उसले पहिचान बनाएको हुन्छ ।
भाषण गर्दा थेगो प्रयोग गर्दिनँ । सत्य कुरा बोल्दा कतिपयलाई मन नपर्ने सक्छ । भाषण गर्नअघि तयारी गर्दिनँ । तर, यी–यी कुरा बोल्छु भनेर दिमागमा ‘सेट’ गर्छु ।
विद्यार्थीजीवनमा मादक पदार्थको स्वाद चाखेको थिएँ । तर, नियमित पिएको होइन । पछिल्लो समय एक गिलाससम्म वाइन लिन थालेको छु ।
गीत–संगीत सुन्ने अभिरुचि छ । श्रीमती गीतकार हुन् । उनको तीन गीतिएल्बम सार्वजनिक भइसकेको छ । मैले पनि एउटा गीत गाएको छु । नारायण गोपाल, दीप श्रेष्ठ, दीपक खरेललगायतको आवाज कर्णप्रिय लाग्छ । कहिलेकाहीं गुनगुनाउँछु ।
पश्चाताप लाग्नेगरी गल्ती गरेको सम्झना छैन । आठ कक्षा पढ्दा ‘मनिटर’ थिएँ । आफ्नो कक्षामा कसैले गल्ती गरे मनिटरले सजाय दिनुपथ्र्यो । कतिपय अवस्थामा आफ्नै कक्षाका साथीलाई सजाय बिस्तारै दिँदा उल्टै कारबाहीमा परेको थिएँ ।
कहिलेकाहीं गल्ती नगरी सजाय पाउनु अस्वाभाविक होइन । मेरो जीवनमा पनि त्यस्तो भएको छ । कलेजमा आन्दोलन गरेको भन्दै मलाई सुरक्षाकर्मीले समाते । मलाई हनुमानढोकामा राखिएको थियो । म समातिएको विरोधमा कलेजमा तोडफोड भएछ । कलेज तोडफोडमा संलग्न भएको भन्दै मेडिसिन कलेज डीनले मलाई ६ महिना ‘सस्पेन्स’ गरे । तर, म तोडफोडमा संलग्न थिइनँ । म समातिएपछि कलेज तोडफोड भएको थियो । त्यतिबेला मलाई विनागल्ती कारबाही गरिएको थियो । म छुटेपछि वास्तविकता बताउँदा डीनले आँसु खसालेका थिए ।
मेरो नुवाकोट र काठमाडौंमा घर छ । काठमाडौंको घर संवत् २०५६ मा बनाएको हुँ । विद्यावारिधि गर्न अमेरिका जाँदा श्रीमती लगेको थिएँ । उनले कमाएको पैसा बचाएर घर बनाएको हो । त्यतिबेला ३०/३५ लाखमा काठमाडौंको घर ठडिएको थियो ।
मेरो राशी सिंह हो । म आफैंले ग्रहदशा हेराउँदिनँ । श्रीमतीले यदाकदा हेराउँछिन् । ग्रहदशा ठीक नएर होला निर्वाचनमा हारियो । देब्रेहातमा राशीअनुसार र सुरक्षाका लागि औंठी हुँ । संसार विश्वासले चलेको छ । केहीमा पनि विश्वास गरिएन भने अराजकता बढ्छ ।
केश फुल्न थालेकाले कहिलेकाहीं मेहेन्दी लगाउँछु । एकपटक फेसियल गरेको थिएँ । अनुहार सुख्खा हुँदा क्रिम लगाउने बानी छ । आक्कलझुक्कल पफ्र्युम प्रयोग गर्छु । जिमखाना जाँदा साउना बस्छु ।
हामी दुवै विद्यार्थी राजनीतिमा थियौं । चिनजान भयो । बिस्तारै एकले अर्कालाई मन परायौं । कसले प्रेम प्रस्ताव राख्यौं, सम्झना छैन ।
नेपालको परिचय भनेकै विविधता हो । यहाँ भौगोलिकमात्रै नभएर सांस्कृतिक विविधता छ । पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्यौं नेपाल संसारकै सुन्दर देश बन्न सक्छ । त्यसका लागि राजनीतिकमात्रै होइन, कानुनी शासन सुनिश्चित हुनुपर्छ । त्यतिभए देश समृद्ध बनाउन समय लाग्दैन । मैले जिम्मेवारी पाउँदा आफूले सक्ने काम गरेको छु ।
सम्बन्धित मानिस जुन क्षेत्रमा सम्बद्ध छ, त्यसको माथिल्लो तहमा पुग्ने जोकोहीको आकांक्षा हुन्छ । म पनि त्यसबाट अछुतो छैन । आफूले पाउने भूमिका समर्पण, इमानदारी र अभिरुचिपूर्वक काम गर्न प्रतिबद्ध छु ।
मृत्युभन्दा अर्को सत्य छँदै छैन । मृत्युबारे सोचिरहन हुँदैन । एकपटक चिप्लेर लड्दा झन्डै एक घन्टा बेहोश भएको थिएँ । मृत्यु अत्यन्तै सहज होस् ।